> Resource > Lugood > Talo & Tricks Dib Loogu Dhiso Lugood Library
"My music waxaa oo dhan ku qoysay oo ka Lugood tan iyo markii aan shil nidaam lahaa shalay. In kastoo aan go'an ii computer, laakiin aan dib ugu heli kartaa maktabadda Lugood aan. Qaar ka mid ah heesaha lumay ku xayiran yihiin aan iPod. Ma suurto gal ah si ay u isticmaalaan, kuwaas oo heeso iPod dib u dhiska Lugood Library ii? walba oo soo jeedinaya? baan ka cararayaa in Windows 8, iyo isticmaali iPod "
Waxa ay noqon kartaa masiibo haddii aad laga badiyay aad Lugood Music Library sabab u ah shil computer, Xayiraadda, ama la xado. Waxaad isticmaali kartaa ID Apple aad dib-u-download Lugood Store iibsaday heeso. Laakiinse kuwanu waa wada dooxay ka CD oo aadan mar dambe ka heli kartaa laga yaabaa in weligood laga badiyay. Nasiib wanaag, haddii qaar ka mid ah ama heesaha oo dhan, kuwaas oo lagu synced in qalab Apple ah ka hor, waxaad u dhiska kartaa Lugood Library iyaga la.
Si ka iDevice ah u dhiska Lugood Library, waxaad u baahan tahay qalab xirfadeed. Sida muuqata, Lugood aan kaa caawinaysaa in aad ka heli kartaa qaar ka mid ah si ay dib u dhiska Lugood Lugood. Waxaad isku dayi kartaa Wondershare TunesGo (Windows) ama Wondershare TunesGo (Mac) . Maxaa yeelay waa qalab lagu kalsoonaan karo dib u dhiska Lugood Library. Markaasaa kaliya in 2 talaabooyin fudud, aad si guul leh ku dhisi doonaan Lugood Library music.
Download version tijaabo ah TunesGo si aad u aragto sida loo isticmaalo dib u dhiska Lugood Library hadda!
2 Talaabada Dib Loogu Dhiso Lugood Music Library
Tallaabada TunesGo 1. Daahfurka
Ka dib markii aad ka soo dejisan iyo rakibi TunesGo, waxaad isla markiiba waa in aan bilowno. Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan qalab Apple oo ku jira muusiga iyo videos aad u baahan tahay la your computer. Ka dib markii ay si guul ah ku xira, waxaad ka arki kartaa qalab Apple la soo bandhigay uu furmo suuqa weyn ee TunesGo.
Fiiro gaar ah: Baro wax badan oo ku saabsan iDevices taageeray u Wondershare TunesGo (Mac) . The version TunesGo Windows taageerada dib u dhiska Lugood Library ka iPhone, iPod, iPad, iwm Baro faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qalabka macruufka oo ay taageerayaan TunesGo (Windows) .
Tallaabada 2. In la tayeeyo Lugood Library
Waxaad arki kartaa in files warbaahinta waxaa lagu kala soocaa qaybaha iyo nooca file la soo bandhigay bidix ee suuqa ugu weyn. Laga soo bilaabo halkan, waa in aad ka heli suuqa kala Music ah. Si aad u dhiska Lugood Library music, waxaad riixi kartaa "Smart dhoofinta in Lugood" inay u dhoofiyaan music oo dhan ka qalab Apple ay u Lugood Library. Ama dooro music loo baahan yahay ka dibna riix "Dhoofinta in Lugood Library".
Talooyin: The version TunesGo Mac haatan kaliya taageeraa dhoofinta music in Lugood Library si toos ah. Wixii videos, aad u dhoofin karaan in ay Mac ka dibna ku daray in ay Lugood Library. TunesGo (Windows) hadda taageertaa music dhoofinta, playlists, iyo sidoo kale videos in Lugood Library. Just download version maxkamadda si aad u hesho muuqaalada sii wanaagsan.